Wasiir juxa oo eedeyn kulul u jeediyay DF. – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 On Oct 26, 2018
HornAfrik-Wasiirkii hore arimaha gudaha ee xukuumadda hadda jirta Cabdi faarax Saciid Juxa oo Magaalada London ku hadlayay ayaa waxaa uu eedo dhinacyo badan leh u jeediyay dowladda Soomaaliya ee uu mar wasiirka ka noqday.
Waxaa uu sheegay in dowladda federalka ah ee Soomaaliya ay ka gaabisay wax ka qabashada howlo badan oo horyala oo uu ku shegay in ay kamid yihiin sugitanaka amniga iyo daadejinta nidaamka federalka ah.
Cabdi Faarax ayaa sheegay in uu jiro isku Milan awoodeed oo Hey’adaha Sharci dejinta iyo fulinta isku milmeen.
Sidoo kale wasiirkii hore arimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Juxa ayaa sheegay madaxda xiligan talisa ay hadal qabsi ka dhigteen Waa Markii u horeysay kuna faanaan arimo horey u jiray basle isaga ayaa shegay in ay markii u horeysay jiraan dhibaatooyin aan horey u dhicin oo uu sheegay in Sharciga jinsiyada lagu shaki gelinayo ahaashiyaha Soomaali.
Waxaa uu hadalkaan Cabdi faraxa ka jeediyay munaasbad ka dhacaday Magalaad London ee Ingiriiska isagoo na sidoo akle dowladda ku eedeyay in ay bur burinayan mamul goboledyada xusidna waxaa mudanyaahy in wasiirkii hore uun yahay musharax madaxweyne ee Puntland oo dorashada lagu wado in ay dhacdo muddo labo bilood ah kadib.
Maxkamadda Ciidamada oo xukuntay habaab isagoo hubeysan Muqdisha laga qabtay